KDE Kunyorera 18.08 inosvika kumagumo ekutenderera kwayo, KDE Kunyorera 18.12 inotangisa muna Zvita | Linux Vakapindwa muropa
KDE Kunyorera 18.08 inosvika kumagumo ekutenderera kwayo, KDE Kunyorera 18.12 inotangisa muna Zvita
Iyo KDE chirongwa nhasi yazivisa iyo chechitatu kugadzirisa kugadzirisa kwe KDE Kunyorera 18.08, iyo inoratidza kupera kweakateedzana 'kutenderera kutenderera.
Kusvika mukati Nyamavhuvhu 2018, KDE Kunyorera 18.08 yakaramba iri software yazvino kwemwedzi mitatu, asi ikozvino, senguva dzose, kusvika kweyechitatu kugadzirisa kugadzirisa, KDE 18.08.3, kunoratidza kupera kwemugwagwa kweiyi nhevedzano.
KDE 18.08.3 inguva huru kwazvo, ine 20 inogadzirisa uye kugadzirisa kwezvakasiyana zvinoshandiswa seAreka, Dolphin, Kate, KDE Mitambo, Kontact, Okular uye Umbrello, mukuwedzera pakuva neshanduro dzekushandura.
Iko kunatsiridzwa kwakanyanya mukuburitswa uku kunosanganisira kugona kweiyo Kmail tsamba mutengi kurangarira iyo HTML yekuona modhi, pamwe nekuregedza mifananidzo yekunze kana ichibvumidzwa, tsigiro yeKate mameseji edhita yekurangarira meta ruzivo, kusanganisira mabhukumaki, pakati pezvikamu, uye kuvandudzwa otomatiki kupuruzira muTerepathy chinyorwa chinongedzo.
Umbrello IDE ikozvino inoita kuti vashandisi vamhanye "docbook kuburitsa kunze" kubva kune dhairekitori rekuvaka, iyo KItinerary yekufambisa ruzivo maturusi izvozvi inozvionera yega nzvimbo pane macompact matikiti, uye iyo Dolphin faira bhurawuza haichabvumidze maviri-kudzo renaming mune imwechete-bhatani maitiro.
Iyo Ark faira maneja yakagadziridzwa kuve nerutsigiro rwekuremadza iyo Compress menyu pane ari kure ma URL uye kugona kuratidza iyo Bvisa menyu pane mafaera pasina kuwedzerwa.
Kana iwe uchida kuona shanduko dzese dze KDE Kunyorera 18.08.3 unogona kuzviita nekushanyira iyo yepamutemo peji pa Iyi link.
KDE Kunyorera 18.12 iri kuuya Zvita 13, 2018
Iyo inotevera huru KDE kuburitswa ichave KDE Kunyorera 18.12, iri kuvandudzwa uye inofanira kusvika mwedzi unouya. Semazuva ese, ichave iine matatu ekugadzirisa, ichisvika kumagumo ekutenderera kwayo munaKurume 2019, ichave ichiwanikwa se beta svondo rinotevera, munaNovember 15, 2018.
KDE yakazivisa zvakare kuwanikwa kweKDE Plasma 5.14.3 uye zvirongwa zvekuvandudza zveKDE Zvimiro 5.52, inozoshandiswa yeKDE Plasma 5.15.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » KDE Kunyorera 18.08 inosvika kumagumo ekutenderera kwayo, KDE Kunyorera 18.12 inotangisa muna Zvita